Shirkadda Apple oo dhawaan soo saari doonto TV cusub oo lagu tilmaamay… | Radio Iftin
Shirkadda Apple oo dhawaan soo saari doonto TV cusub oo lagu tilmaamay…
(Monday, March 23, 2015)- Warsaxaafadeed ka soo baxay shirkada Apple ayaa lagu sheegay in shirkada ay dhawaanahaan ay ku soo kordhin doonto barnaamij cusub oo ay ugu tala gashay jiilka cusub ee soo koraya.
Shirkada ayaa waxay ku howlan tahay sidii ay u soo saari lahayd TV cusub oo ay ugu magac dartay Apple TV bisha 7-aad fooda inagu soo haysa ee sanadan aynu ku gudi jirto ee 2015-ka.
Horaanta bishaani aynu ku guda jirno ee Maarso ayayahayd markii shirkadu ay shaacisay in barnaamijkani cusub markuu soo baxo ay ku iibin doonto lacag aad u qiimo jaban oo ay shirkadu ku qayaastay lac gaareysa 69 doolarka mareykanka ah.
Ma ahan markii ugu horeysay ay shirkada Apple soo saarto barnaamijyo oo ay ugu tala gashay jiilka soo koraya iyadoo lagu xasuusan karo in ay horey u soo saartay sanadkii 2007 – 2010 – 2012 iyo waliba 2013-ka oo ay dhamaanba sanadahaasi ay shirkada soo saartay barnaamijyo ay ugu tala gashay dadka ku xiran shirkadaasi.
Macaamiisha ku xiran shirkadani ayaa iyana lafilayaa in ay si balaaran u soo dhaweendoonaan bisha 7-aad ee fooda inagu soo haysa ee sanadaan aynu ku gudi jirno 2015-ka barnaamijka oo ay ugu tala gashay shirkada caanka ah Applle.